खुसीको खबर: जहाँबाट फैलियो कोरोना भाइरस, त्यही सहरमा अब एक जना पनि छैन बिरामी ! «
खुसीको खबर: जहाँबाट फैलियो कोरोना भाइरस, त्यही सहरमा अब एक जना पनि छैन बिरामी !
Published : 27 April, 2020 3:24 pm
चीनको वुहान सहरबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी विश्वभर फैलिएको थियो । आइतबार त्यही वुहानमा कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या शून्यमा झरेको छ । वुहानका अस्पतालहरूका रहेका कोभिड–१९ का सबै बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिएको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ता मी फेङले यो उपलब्धि वुहानका स्वास्थ्यकर्मीको कडा मेहनत र उनीहरूको सहयोगको कारण नै सम्भव भएको बताएका छन् ।